प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विरोधमा डा. गोविन्द केसी सडकमा – Samabeshi Khabar
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विरोधमा डा. गोविन्द केसी सडकमा
३ माघ २०७७, शनिबार १४:०८ by Samabeshi Khabar
काठमाडौं, (ससं) । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमको विरोधमा प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी सडकमा आएका छन् । नागरिक समाजद्वारा आयोजित राजधानीको माइतीघरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा डा केसी पनि सहभागी भएका हुन् ।
सहभागीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई निरंकुश शासकको संज्ञा दिँदै ‘नागरिक अघि बढ्दैछ, लुटतन्त्र ढल्दैछ, प्रतिनिसधसभा मार्न पाइँदैन, निरंकुश सरकार चाहिँदैन’लगायतका नारा प्रदर्शन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देशैभर विरोधको स्वर चर्को देखिएको छ ।